मेलम्चीका बाढी पी’डित फेरि विस्थापित, भन्छन् पालमा जीवन गुजार्न गाह्रो भयो ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
August 1, 2021 AdminLeaveaComment on मेलम्चीका बाढी पी’डित फेरि विस्थापित, भन्छन् पालमा जीवन गुजार्न गाह्रो भयो ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
मेलम्ची, १७ साउन (रासस) : देवराज सुवेद, भ्रेमाथाङमा गत असार १मा बाढीसँगै आएको पहिरोले क्षति पु¥याएको ४७ दिनपछि मेलम्ची खोलामा फेरि बाढी आएर २० घर र करोडाँै मूल्यका खेत बगाएको छ । बिस्तारै सामान्य स्थितिमा आउन लागेका हेलम्बु र मेलम्चीका बाढीपीडित फेरि विस्थापित भएका छन् ।
हेलम्बु राजमार्गका विभिन्न स्थानमा पहिरो जाँदा मेलम्चीबाट हेलम्बुमा सवारीसाधन जान नसकेको त्यहाँका नगरप्रमुख डम्बर अर्यालले जानकारी दिनुभयो । भिडियो यहाँबाट हेर्नुहोस:
आज फेरि बढ्यो सुनको भाउ ! हेर्नुहोस् प्रति तोला कति पुग्यो सुनको मूल्य……